Akon’ny Ava : Maherin’ny 140 000 ireo traboina -
AccueilSosialyAkon’ny Ava : Maherin’ny 140 000 ireo traboina
Akon’ny Ava : Maherin’ny 140 000 ireo traboina
13/01/2018 admintriatra Sosialy 0
Araka ny tatitra vonjimaika navoakan’ny BNGRC farany teo, dia tafakatra 149 942 ireo traboina manerana Nosy, izay tombanana raha oharina amin’ny trano tondraka sy ireo tanimboly rava vokatry ny tondra-drano. Tafakatra 42 isa ihany koa ireo namoy ny ainy vokatry ny fandalovan’ny AVA, raha toa ka, 26 ireo tsy hita popoka. Miisa 18 806 kosa ireo olona nafindra toerana, ary 29 isa ireo fotodrafitrasa-pahasalamana simba. Fantatra ihany koa fa efa nody avokoa ireo olona traboina nipetraka teny amin’ny trano fonenana eny amin’ny ANS Ampefiloha. Fa mialoha ny hialan’izy ireo tao, nisy ny fanadiovana faobe sy famonoana mikraoba natao tamin’ny alalan’ny asa tanamaro na Himo.
Mahakasika ireo lalam-pirenena tapaka indray kosa, dia efa manomboka misokatra tsikelikely izy ireo taorian’ny fandraisana andraikitra nataon’ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny Asa vaventy. Na mbola tsy vita tanteraka mantsy ireo tetezana mahatonga ny fitokana-monina an’ireo tanàna sasantsasany, efa nisy ny fandraisana fepetra toa ny fametrahana sambo haingam-pandeha hampitana ireo mpandeha. Eo koa ny “deviation” ho an’ireo lalana simba. Ho an’ny lalam-pirenena RN7 iny izao, fantatra fa efa azo hifamezivezana tanteraka. Efa tafapetraka ireo tetezana nahatonga ny fahatapahana toa ny tao Vohiposa izay eo anelanelan’ny Camp Robin sy Ambohimasoa. Eo koa ny tetezana Andranovorivato izay 30 km miala ny Fianarantsoa raha ho any Toliara. Tsara marihina anefa fa ireo fiara madinika ihany hatreto no afaka mifamezivezy amin’ireo lalana ireo.